Ividiyo yeHippo: Ukunyusa amaxabiso okuPhendula ngokuThengisa ngokuThengisa iVidiyo | Martech Zone
I-inbox yam imdaka, ndizakuyivuma tu. Ndinemithetho kunye neefolda ezihlakaniphile ezigxile kubathengi bam kwaye phantse yonke enye into iwela ecaleni ngaphandle ithimba ingqalelo yam. Ezinye iindawo zokuthengisa ezibalaseleyo zii-imeyile zevidiyo ezithunyelwe kum. Ukubona umntu ethetha nam buqu, ukujonga ubuntu bakhe, kwaye ngokukhawuleza echaza ithuba lam kukuzibandakanya… kwaye ndiqinisekile ukuba ndiphendula rhoqo.
Ayindim ndedwa… ukuthengiswa kweevidiyo yindlela yokukhula okuphezulu kumaqela athengisayo ukuba aphumele ngaphandle kunye nethemba ngeenkampani ezininzi zibona ngaphezulu kwe-300% yokuphakanyiswa kumaxabiso eempendulo.
Ividiyo yeHippo ibonelela ngeqonga elilula leqela lakho lokuthengisa ukwakha ukuthembana, ukubonelela ngexabiso kunye nokukhulisa ubudlelwane obunethemba ngoncedo lwe-REAL kunye neevidiyo ezenziwe ngabantu. Ngelixa ujongano lwazo lomsebenzisi lulula… ludityaniswe kanye kwibar yomsebenzi, oyena mahluko wenene Ividiyo yeMvubu luluhlu lwabo lokudibanisa ukulandelela umsebenzi wakho wokuthengisa phantse kuyo yonke i-imeyile, ulawulo lobudlelwane bomthengi (CRM), kunye namaqonga okuvumela ukuthengisa.
Ividiyo yeMvubu Ivumela iqela lakho lokuthengisa ukuba lirekhode ividiyo ngocofa kanye, lidibanise kwaye libelane ngeevidiyo ngaphandle komthungo ngaphandle kokutshintsha amaqonga, kwaye emva koko ulandelele iireyithi zokuphendula ukunyusa ukuqhubela phambili kunye nokuqhubela phambili ukuthengisa.
Iimpawu zeQonga leVidiyo yeHippo
UkuHlalwa kweeVideos -Nika ividiyo yakho ukuqukuqela okugqibeleleyo obunenjongo yokukhetha ukuphungula ukunqumama okungathandekiyo, isityalo sezinto ezingafunekiyo, ukufiphalisa okongeziweyo ukuze ugcine ugxininiso, phinda wenze umlinganiselo wembonakalo, kwaye uyiphucule ngokongeza i-emojis okanye i-callouts.
Imvelaphi ebonakalayo -Yandisa imvelaphi yakho yevidiyo ngokuthanda kwakho ngetekhnoloji yabo yangasemva.
IiVenkile zeVidiyo -Fumana umyalezo wakho ngokufanelekileyo ngokongeza umbhalo kunye nemifanekiso kwividiyo yakho.
GIF Embeds -Phakamisa kwi-inbox yomamkeli wakho ngee-GIF ezineemifanekiso ze-GIF ezidlalayo xa zivula i-imeyile yakho.
Ukuthumela ngaphandle -Thumela ngaphandle iividiyo kwiYouTube, G Suite, nakwamanye amaqonga ngokuthe ngqo ngaphandle kokuphazamiseka.
Ukutsala umnxeba - zibandakanya amakhonkco ezenzelwe wena ukubhukisha intlanganiso, okanye ukongeza i-Call-To-Action amaqhosha enziwe ngokwesiqhelo ukucwangcisa idemo okanye ukufumana umnxeba.
Amaphepha eNtengiso eyenzelwe wena -Qhuba umkhombandlela ukusuka kwividiyo enye ukuya kwithala leencwadi lezinye iividiyo ezinokunceda ukuqhubela phambili uphando kunye nohambo lwabathengi.
Ividiyo yeTeleprompter Asinguye wonke umntu onokuthetha kakuhle ngaphandle kwesicwangciso…
Ukulandelela iProspect & Analytics -Gcina iliso ekusebenzeni kwevidiyo yakho, umyinge wokubukela, imidlalo iyonke, izabelo, amanani abantu, ababukeli abakhethekileyo, kunye nomsebenzi ovela kwiividiyo zakho.
Unxibelelaniso – Dibanisa kunye inbox, Outlook, Salesforce, Hubspot, Outreach, SalesLoft, LinkedIn Sales Navigator, Pipedrive, ActiveCampaign, Slack, Zoom, Zapier, kunye nezinye izixhobo ukuze umsebenzi wakho kunye nempendulo ibhalwe ngokupheleleyo kwaye ilandelelwe.
Ngaphandle kweqonga, umrhumo wakho ku Ividiyo yeMvubu ibandakanya uqeqesho lwehlabathi lokwenyani kunye nezicwangciso ezivela kuJeffrey Gitomer.
Zama iVidiyo yeHippo Mahala
Ukubhengeza: Ndiyinxalenye yeVidiyo yeHippo kwaye ndisebenzisa amakhonkco adibeneyo kweli nqaku.
tags: ActiveCampaignoopopayi gifCRMemailFreshdeskinkonzo entshaividiyo yemvubuhubspotintercomJiraikhonkco lokuthengisa elinxibelelanisiweyomailchimpUmbhobhouhlalutyo lwethembaukulandelwa kwethembaUkunika amandla ukuthengisaamaphepha entengisoukuthengisaIntengisoLoftimeyile yevidiyoukuhanjiswa kwevidiyoividiyo eyalekayoukukhangela ividiyoiifowuni zokuthengisa ividiyouqeqesho lokuthengisa ividiyoividiyo ye-teleprompterWordPresskwindawo yokusebenzelayoutubezapperzendeskzohodesk